Momba anay - Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2009, miaraka amin'ny foibe any Suzhou City, Shina, Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina hanome vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro ho an'ny Kabinetra Indoor / ivelany, Rafitra fitahirizana angovo bateria, Ivotoerana Data ary Logistics Cold Chain, sns. BlackShields dia manokan-tena hanampy ny mpanjifantsika ao anatin'izany ny Telecom, Power Grid, Finace, Angovo azo havaozina, Fitaterana ary ny indostrian'ny automatique hitazona ny tontolo manodidina ny hafanana sy ny hamandoana ho an'ny fiasan'ny fitaovana.
BlackShields dia nandalo ny fanamarinana Rafitra fitantanana kalitao ISO9001, fanamarinana rafitra fitantanana ny tontolo iainana ISO14001 ary fanamarinana rafitra fitantanana ara-pahasalamana sy fiarovana ara-pahasalamana ISO45001 ary afaka manome vokatra miaraka amin'ny fankatoavana CE, TUV ary UL, sns araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny ekipan'ny injeniera mavitrika ao anatin'izany ny famolavolana mafana sy ny injeniera fanaraha-maso elektrika, BlackShields dia afaka mamolavola vokatra fanaraha-maso ny toetr'andro miaraka amin'ny mpanara-maso noforonina manokana ho an'ny rindrambaiko sy fitaovana mifanentana kokoa.
Amin'ny maha atrikasa manan-tsaina, BlackShields dia manangana tsipika fivoriambe mandeha ho azy ho an'ny vokatra fanaraha-maso ny toetr'andro miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny kaody bar. Ny vokatra rehetra an'ny BlackShields dia azo trandrahana amin'ny alàlan'ny kaody bar mba hanatsarana ny kalitao sy ny serivisy.
BlackShields dia nampiasa RMB240 tapitrisa hananganana orinasa vaovao izay mirefy 27,000 metatra toradroa amin'ny taona 2020. Ho vita amin'ny volana aogositra 2021 ny tranobe ary hanomboka hiasa amin'ny Oktobra 2021 ny fako vaovao. orinasa manan-tsaina kokoa.
Nahoana no misafidy BlackShield:
• Ekipa R&D mavitrika miaraka amin'ny fitaovana R&D mandroso sy laboratoara fitiliana, patanty isan-karazany ary asa mahay ho an'ny vahaolana mifehy ny toetrandro mahomby
• Mifantoha amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, mahafeno haingana sy marina ny fepetra takiana
• Sehatra ankapobeny sy singa manara-penitra, midina ny vidiny ary fotoana fohy ho an'ny vokatra
• Toeram-pivarotana tokana miaraka amin'ny tsipika vokatra samihafa ho an'ny vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny toetr'andro, ny fahafaha-manamaivana dia manarona 200W ~ 200KW
• Atrikasa manan-tsaina ho an'ny famokarana miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra
• Ny traikefa amin'ny famokarana> 1 tapitrisa pcs vokatra fanaraha-maso ny toetrandro ho an'ny tsena eran-tany
Efitrano fitsapana 7.5kW
180kW Test Chamber
Fivoriambe mandeha ho azy
Chamer ho an'ny singa
Lisitry ny mpiara-miasa sy ny mpanjifa